ကွိုတငျမသိရှိထားရငျ နားလညျမှုလှဲမှားနိုငျတဲ့ မိနျးကလေးတှရေဲ့ စိတျအထှထှေေ - Lifestyle Myanmar
မိနျးကလေးတှနေဲ့ပတျသတျပွီး ထူးခွားခကျြတှအေမွောကျအမြားရှိပါတယျ။ သူတို့ရဲ့နထေိုငျပုံနဲ့အပွုအမူတှကေိုကွညျ့ပွီး သူတို့ရဲ့စိတျထားကို ကောကျခကျြဆှဲရငျတော့ မှားပါလိမျ့မယျ။ သငျ့ရဲ့ခဈြသူကောငျမလေး သို့မဟုတျ သူငယျခငျြးကောငျမလေးတှမှောရော ဘယျလိုစိတျထားရှိလဲဆိုတာ သူတို့ရဲ့စရိုကျတှကေိုကွညျ့ပွီး ဆုံးဖွတျဖူးပါသလား? ဒါဆိုရငျတော့ ယခုဖျောပွတဲ့အကွောငျးလေးနဲ့ တိုကျဆိုငျနရေငျ သူမကိုမနျးရှငျးချေါလိုကျပါ။
တဈခြို့ကောငျမလေးတှဟော မာနကိုဒိုငျးတဈခုလို ကာရံထားပါတယျ။ လာမထိနဲ့မီးပှငျ့သှားမယျ ဆိုတာမြိုးပါ။ ဒါပမေယျ့တကယျတမျးကွတော့ သူတို့ဟာသူတို့ထငျသလောကျမမာကွောပါဘူး။ သူတို့တကယျခဈြတဲ့ခဈြသူနဲ့တှတေဲ့အခါမှာတော့ မီးနဲ့ထိတဲ့ဖယောငျးလိုပဲ အလှယျတကူပြျောဆငျးသှားတတျကွပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ခဈြသူကောငျမလေးဟာ သငျဆိုးသမြှကို ဘာပဲဖွဈနနေေ နာလညျပေးပါသလား။ အဲဒီလိုခဈြသူလေးကိုပိုငျဆိုငျထားရလို့ စိတျခလြကျခကြဲနိုငျမယျလို့တှေးနမေဲ့အစား သငျပိုပွီးသတိထားသငျ့ပါတယျ။ သငျ့ရဲ့အမှားဟာ သူလကျမခံနိုငျလောကျတဲ့အခွအေနေ ဒါမှမဟုတျ သူတို့နားလညျမပေးနိုငျတော့တဲ့အခြိနျကိုရောကျရငျ သငျ့အတှကျရှငျးပွခှငျ့တောငျရမှာ မဟုတျလို့ပါပဲ။
သူတို့ဟာ တခွားမိနျးကလေးတှလေို သငျ့အပျေါမှာမဆိုးနှဲ့ပဲ လူကွီးဆနျသလိုထငျရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့လိုထငျပွီးခပျစိမျးစိမျးမဆကျဆံလိုကျပါနဲ့။ ဘယျလောကျပဲရငျ့ကကျြတညျငွိမျတဲ့မိနျးကလေးဖွဈပါစေ ခဈြသူဆီက ဂရုစိုကျမှု၊ ကွငျနာမှု၊ ပှဖေ့ကျမှု မလိုခငျြတဲ့မိနျးကလေးဆိုတာ မမွငျမိသေးလို့ပါ။
တခြို့မိနျးကလေးတှကေ အသဲမာကွတယျ။ သူတို့ဟာဘယျတော့မှမငိုဘူးလို့ ယုံကွညျကွပမေယျ့ တကယျတမျးသူတို့ငိုရငျတော့ မတိတျတော့ပါဘူး၊ ဘယျလောကျခြော့ခြော့ အကွာကွီးငိုနတေတျပါတယျ။
သငျတို့ရဲ့ ခဈြသူ ဒါမှမဟုတျ သူငယျခငျြးတှထေဲမှာ အရမျးအစအနောကျသနျပွီး ပြျောပြျောနတေတျတဲ့ ကောငျမလေးတှရှေိလား။ သူတို့ကိုကွညျ့လိုကျရငျ ဘယျလောကျစစစိတျမဆိုးတတျဖူးလို့ ထငျရပမေယျ့ သူတို့ဟာ ထိလှယျ၊ ရှလှယျ၊ ခံစားလှယျတတျကွပါတယျ။
6. ကလေးဆိုးလေးလို စိတျကောကျတတျတဲ့မိနျးကလေးတှေ
သငျ့အပျေါမှာ ကလေးဆိုးလေးတဈယောကျလို အမွဲတမျးဆိုးနှဲ့နတေတျတဲ့ ခဈြသူမြိုးရှိလား။ သူတို့ဟာအမွဲတမျး ဂြီကပြွီးစိတျကောကျတတျပမေယျ့ သငျ့မှာပွဿနာတဈစုံတဈရာနဲ့ ရငျဆိုငျရတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့ဟာ ရငျ့ကကျြတညျငွိမျပွီး သငျ့ဘေးမှာအားပေးနမေယျ့ သူတှပေါ။
ဘယျလိုမိနျးကလေးမြိုးနဲ့ပဲဖွဈဖွဈ သငျခဈြလို့လကျထပျပွီးလြှငျ ဆကျခဈြနယေုံနဲ့မပွီးသေးပါဘူး။ တခါတလခေဈြသူဘဝကလို ဂရုစိုကျမှုကွငျနာမှုတှနေဲ့ ရိုမနျတဈဆနျဖို့လိုပါသေးတယျ။ တကယျတော့မိနျးမဟာမိနျးမပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့သငျ့အပျေါမှာစိတျကောကျခငျြကောကျမှာပါ။ အသကျခွောကျဆယျထိတိုငျအောငျ သငျခြော့တာကို သူတို့လိုခငျြပါသေးတယျ။
ကြိုတင်မသိရှိထားရင် နားလည်မှုလွဲမှားနိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်အထွေထွေ
မိန်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ထူးခြားချက်တွေအမြောက်အများရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့နေထိုင်ပုံနဲ့အပြုအမူတွေကိုကြည့်ပြီး သူတို့ရဲ့စိတ်ထားကို ကောက်ချက်ဆွဲရင်တော့ မှားပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေး သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းကောင်မလေးတွေမှာရော ဘယ်လိုစိတ်ထားရှိလဲဆိုတာ သူတို့ရဲ့စရိုက်တွေကိုကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ဖူးပါသလား? ဒါဆိုရင်တော့ ယခုဖော်ပြတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေရင် သူမကိုမန်းရှင်းခေါ်လိုက်ပါ။
တစ်ချို့ကောင်မလေးတွေဟာ မာနကိုဒိုင်းတစ်ခုလို ကာရံထားပါတယ်။ လာမထိနဲ့မီးပွင့်သွားမယ် ဆိုတာမျိုးပါ။ ဒါပေမယ့်တကယ်တမ်းကြတော့ သူတို့ဟာသူတို့ထင်သလောက်မမာကြောပါဘူး။ သူတို့တကယ်ချစ်တဲ့ချစ်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ မီးနဲ့ထိတဲ့ဖယောင်းလိုပဲ အလွယ်တကူပျော်ဆင်းသွားတတ်ကြပါတယ်။
သင့်ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးဟာ သင်ဆိုးသမျှကို ဘာပဲဖြစ်နေနေ နာလည်ပေးပါသလား။ အဲဒီလိုချစ်သူလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားရလို့ စိတ်ချလက်ချကဲနိုင်မယ်လို့တွေးနေမဲ့အစား သင်ပိုပြီးသတိထားသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အမှားဟာ သူလက်မခံနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေ ဒါမှမဟုတ် သူတို့နားလည်မပေးနိုင်တော့တဲ့အချိန်ကိုရောက်ရင် သင့်အတွက်ရှင်းပြခွင့်တောင်ရမှာ မဟုတ်လို့ပါပဲ။
သူတို့ဟာ တခြားမိန်းကလေးတွေလို သင့်အပေါ်မှာမဆိုးနွဲ့ပဲ လူကြီးဆန်သလိုထင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့လိုထင်ပြီးခပ်စိမ်းစိမ်းမဆက်ဆံလိုက်ပါနဲ့။ ဘယ်လောက်ပဲရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ပါစေ ချစ်သူဆီက ဂရုစိုက်မှု၊ ကြင်နာမှု၊ ပွေ့ဖက်မှု မလိုချင်တဲ့မိန်းကလေးဆိုတာ မမြင်မိသေးလို့ပါ။
တချို့မိန်းကလေးတွေက အသဲမာကြတယ်။ သူတို့ဟာဘယ်တော့မှမငိုဘူးလို့ ယုံကြည်ကြပေမယ့် တကယ်တမ်းသူတို့ငိုရင်တော့ မတိတ်တော့ပါဘူး၊ ဘယ်လောက်ချော့ချော့ အကြာကြီးငိုနေတတ်ပါတယ်။
သင်တို့ရဲ့ ချစ်သူ ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ အရမ်းအစအနောက်သန်ပြီး ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ ကောင်မလေးတွေရှိလား။ သူတို့ကိုကြည့်လိုက်ရင် ဘယ်လောက်စစစိတ်မဆိုးတတ်ဖူးလို့ ထင်ရပေမယ့် သူတို့ဟာ ထိလွယ်၊ ရှလွယ်၊ ခံစားလွယ်တတ်ကြပါတယ်။
6. ကလေးဆိုးလေးလို စိတ်ကောက်တတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေ
သင့်အပေါ်မှာ ကလေးဆိုးလေးတစ်ယောက်လို အမြဲတမ်းဆိုးနွဲ့နေတတ်တဲ့ ချစ်သူမျိုးရှိလား။ သူတို့ဟာအမြဲတမ်း ဂျီကျပြီးစိတ်ကောက်တတ်ပေမယ့် သင့်မှာပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့ဟာ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်ပြီး သင့်ဘေးမှာအားပေးနေမယ့် သူတွေပါ။
ဘယ်လိုမိန်းကလေးမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် သင်ချစ်လို့လက်ထပ်ပြီးလျှင် ဆက်ချစ်နေယုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူး။ တခါတလေချစ်သူဘဝကလို ဂရုစိုက်မှုကြင်နာမှုတွေနဲ့ ရိုမန်တစ်ဆန်ဖို့လိုပါသေးတယ်။ တကယ်တော့မိန်းမဟာမိန်းမပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့သင့်အပေါ်မှာစိတ်ကောက်ချင်ကောက်မှာပါ။ အသက်ခြောက်ဆယ်ထိတိုင်အောင် သင်ချော့တာကို သူတို့လိုချင်ပါသေးတယ်။